Pamusoro Mibvunzo Pamusoro pePRINCE2 Certification Answered! - ITS
Pamusoro Mibvunzo Pamusoro pePRINCE2 Certification Answered!
Mukuona kwekutarisa pane chiyero chikuru, takawana dzimwe nyaya dzechokwadi nekuremekedza Prince2 certification ndokutaura navo kuti zvibvumire kugadzirisa pane zvakasarudzwa zvakanyanya.
1. Ndezvipi Zvikomborero Zvikuru zveChristi2 Certification?
Prince2 Certification ichakubatsira kuti uwane fantastic purojekiti utariri unyanzvi kuitira kuti munhu awane nyore kubata nebasa risina kukanganisika. Ichinovandudza unyanzvi hwako mune zvakasiyana-siyana masangano semashandiro ekushanda, kushandiswa kwemari, uye kuongororwa kwenjodzi.
Nokukuratidza nzira yakarurama yekudzora kukohwa kweprojekiti, ichavaka mikana yako yekuwana kushanda mune chikamu chekanakisisa masangano ekuchengetedza mabasa panyika.
2. Ndezvipi Zvikamu Zvikuru ZveChirungu2 Certification?
Sezviri pachena, inoratidzira zvikamu zveumwe neumwe waanoshanda naye ari kutarisira marudzi akasiyana-siyana ema modules.
Zviri nyore kushandisa mumapurogiramu nekuda kwezvakananga uye nechinangwa nechokuita.
Micro Management yeprojekti inogona kushanda nesimba kana ichiparadzanisa purojekiti yose mumaduku maduku.
3. Ndezvipi Zvisizvo Zvimwe zveChristi2 Certification?
Kune zvitatu zvePrince2, kunyanya:
Prince2 nheyo yekutanga ichakubatsira pakunzwisisa pfungwa dzinokosha, kupupurira, uye mazano. Mushure mokubudirira kwekugadzirisa kwekugadzirisa uye kunoda kudzidziswa, mumwe achave akakodzera kudzidzira unyanzvi.
Nyanzvi Inyanzvi ichakubatsira pakunzwisisa mazano anobatsira pakushandisa mifumo yeHree2 nemagadziro mumamiriro akasiyana siyana nemapurogiramu. Iyi ndiyo mhando yemafungiro uye chivimbiso chekuti commonsense.
Chikamu chechitatu uye chekupedzisira ndiChristi2 vhigiridzi vehupirisiti, vanoedza nevatariri vehurumende vasina kujairika.
Kuti uchengete chiyeuchidzo chako chakakosha, munhu anofanira kutora kuongorora kwechidziro nguva nenguva kuti aitezve.
4. Nzira Yokugadzirira Sei Prince2 Certification?
Mumwe anogona kugadzirira pamusha kuburikidza achishandisa bhuku guru rinonzi Prince2. Murume anofanira kuita urongwa hwekugadzirisa uye oiverenga pane zvinyorwa zvinofadza. Mumwe anofanira kuedza kuedza kuchengetedza zvinhu zvakasiyana muurongwa. Zvose zvinokosha uye zvinotarisana kune mumwe nemumwe.
Unogonawo kutarisa: - A Complete Guide Kwa Prince2 Certification
Tora Professional Coaching For Certification
Masangano akasiyana anopa dzidzo yekudzidziswa kuChris2 chiyeuchidzo chekuongorora. Iwe unogona kutsvaga paIndaneti kutarisa pane zvisarudzo zvakachinjwa. Izvi zvivako zvakasangana nevadzidzisi, funga nezvezvinhu, zvinyorwa uye zvidzidzo zvinosemesa zvinobatsira pasi pekugadzirira kuongorora.
Usati wasarudza sangano chero ripi neripi kana muongorori wepaIndaneti, unongokumbira kuongororwa uye mabhuku akapfuura nechinangwa chaunogona kuyambuka chengetedza matambudziko avo ekuve akakurumbira mumhizha.
Mazano mashomanana ekudisa Test
Verenga mhinduro dzakakodzera zvinoshamisa - Mibvunzo ndeyemhando dzakasiyana-siyana, saka unoda kuputsa imwe neimwe yekushandisa uye sarudza yakanakisisa. Nzira yako inofanirwa kunge iri kutora mhinduro isingakoshi yekutanga uye shure kwekudzorerazve nzira yacho.
Nguva yekuchengetedza ndicho chinhu chikuru - Mumwe anongotora maawa 2.5 chete, kubva zvino kupedza kubvunzurudza kwega kwega nguva inogamuchirwa inokosha.
Unoita miedzo yakawanda inoseka - muedzo wokunyengedza uchabatsira mubatsiri kuti awane kunzwa kwechokwadi kwekuongorora, uye nekugadzirira kwakasiyana-siyana kwemiedzo inoseka, munhu anogona kuparadzanisa zviitiko uye kugadzirira chaiye bvunzo saizvozvo.
Pane here mibvunzo inowanikwa neChris2 Certification, iyo yakaramba isina kupindurwa? unogona kubvunza mumashoko.
Kuenzanisa pakati pePPP V / s PRINCE2 Zviratidzo
PMP vs PRINCE2 vs CAPM: Ndeupi wakanaka kwandiri?